Itoobiya oo ku socota kobaca dhaqaale ee ugu weyn Gobolka (World Bank) – Kasmo Newspaper
Itoobiya oo ku socota kobaca dhaqaale ee ugu weyn Gobolka (World Bank)
Updated - January 15, 2018 4:09 pm GMT
London (Kasmo) Sida ka muuqata Warbixintii u dambaysay ee Bangiga Adduunka (Bogga 143), dhaqaalaha Itoobiya wuxuu ku sii socon doonaa kobaca ugu sarreeya Goboloka Bariga Afrika.
Itoobiya waxay wahktigaan xaadirka ah ka mid tahay dalalka ugu muhiimsan Geeska Afrika, dhaqale ahaan iyo nabadgalyo ahaan intaba.
Waxaa la saadinayaa in dalku nqodo midka ugu weyn ee dhoofiya Tamarta, iyo midka ugu muhiimsan Qaaradda oo idil dhanka wax soo-saarka Tamarta dib loo isticmaali karo (Renewable Energy).
In kasta oo xasilloonidarro siyaasadeed ka jirto, Itoobiya waxay si gaar ahaaneed ugu hawlantahay dagaalka argagixisada maxalliga ah, waxayna gacan ka gaysataa xasilinta Suudaanta Koofureed.
Dokumentiga World Bank waxaa ka muuqanaya in sannadka cusub ee 2018ka Itoobiya joogtayn doonto kobaca dhaqaale ee ugu xawaaraha dheer Afrikada Bari oo u dhigma 8,2%.
Marka la eego kobaca dalalka kale ee Afrika, Warbixintu waxay tilmaamaysaa in dhaqaalaha Kenya kordhi doono 5,5%, Tanzania 6,8%, Uganda 5,1%, Ruwanda 5,9%. Laakiin dalka horyaalnimada haysta wuxuu noqonayaa Ghana oo koboca dhaqaalaha dalku la mid yahay 8,3%.
Xogta World Bank waxay soo baxday maalmo kooban ka dib markii 3dii Jennaayo, Xafiiska R/Wasaare Hailemariam Desalegn looga dhwaaqay in la sii deynayo dhammaan maxaabiistii siyaasadda, si loo gaaaro dib u heshisiin qaran.
Itoobiya, sida Wakaaldda Reuters sharraxayso, waxaa marar badan lagu eedeeyaa cadaadiska shacabka iyo cabburinta xorriyadda saxaafadda, iyada oo marmarsiinyo looga dhiganayo sababo nabadgalyada la xiriira dartood.
Xitaa mucaaradka oo aan wax matalaad ah ku lahayn Barlamaanka ayaa xukuumadda ku eedeeya cabsigalin iyo cagajuglayn joogta ah.
Sidaas oo ay tahay, mas’uuliinta xilligaan talada haysa waa iska fogaynayaan dhammaan eedahaas ku saabsan xayiraadaha siyaasadda.